Deni oo Fariin Culus u diray Shaqsiyaad uu ku eedeeyay iney wadaan kicin dadweyne
Sunday January 17, 2021 - 19:25:29 in Wararka by Editor in Chief
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo a safar ku tagey Qardho ayaa tababar usoo xiray dufacadii labaad ee ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebisay dugsiga Tababarka ee Xorgoble. Munaasabadda tababarka loogu soo xiray dufcadii lab
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo a safar ku tagey Qardho ayaa tababar usoo xiray dufacadii labaad ee ciidamada Booliska Puntland ee ka qalinjebisay dugsiga Tababarka ee Xorgoble. Munaasabadda tababarka loogu soo xiray dufcadii labaad ee Ciidamada Booliska Puntland, waxaa ka qeybgalay Guddiga dib-u-habeynta Ciidamada, Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Puntland, Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland, Masuuliyiin hore usoo qabtay xilka Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya, xubno ka mid ah goleyaasha Dowladda Puntland, Maamulka Gobolka Karkaar, kan degmada Qardho iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo hadal ka jeediyay munaasabadda ayaa waxaa uu sheegay in booliskaan uu ka duwan yahay booliiskii hore isla markaasna ay diyaar u yihiin in ay cid kasta oo dambi gasha cadaaladda la tiigsadaan.
Madaxweynaha ayaa u digey dadka uu ku sheegay in ay ‘ caadeysteen fulinta dano siyaasadeed iyo kicinta bulsho iyagoo adeegsanaya barasha bulshada’.
Madaxweyne Deni mar uu ka hadlay xaaladda Soomaaliya waxaa uu yiri: